ပျိုမေတို့ လုံးဝ လုံးဝ လက်မထပ်သင့်တဲ့ယောက်ျားတွေ ရဲ့ အပြုအမူ (၅) ချက် – Shwewiki.com
လူတိုင်းက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်လိုကြပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်မယ့် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကလည်း အများကြီးရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်ထပ်ဖို့ ဆိုတာကတော့ သေသေချာချာ အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာပါ။ သင်နဲ့လက်ထပ်မယ့် အမျိုးသားက ဒီလိုအချက်တွေ ပြုမူနေတယ်ဆိုရင်တော့ လက်မထပ်သင့်ပါဘူးနော် ….
သင့်ချစ်သူက ပြောပြီးသားစကားတွေကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့ လွယ်လွယ် ကတိဖျက်တတ်သူ ဆိုရင် တကယ့်ပြဿနာ ပါပဲနော်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကတိသေးသေးလေး ကိုတောင် မတည်သူက ကတိအကြီးကြီးတွေကို တည်ဖို့ဆိုတာ ဝေးလွန်းပါတယ် …။
(၂) သင့်အပေါ် လုံးဝ လေးစားမှုမရှိဘဲ သိက္ခာချသူ
လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစားမှု မရှိတဲ့အခါ လုံးဝ အဆင်မပြေပါဘူးနော်။ သင့်ကို အလေးမထားသူက နစ်နာအောင်လုပ်ဖို့လည်း ဝန်လေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အပေါ် လေးစားမှုမရှိဘဲ သိက္ခါချတတ်သူကို လက်ထပ်မိရင်တော့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ အလှမ်းကွာနေမှာပါ …။
(၃) သင့်ရဲ့စိတ်ကို နာကျင်စေသူ
သူ့ရဲ့အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေကြောင့် သင်က အမြဲလိုလိုနာကျင်နေရတာက လုံးဝကို မှားနေပါပြီ။ သင့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင် အဆင်မပြေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အဆင်ပြေသွားအောင် ပြုပြင်နေဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို အမြဲနာကျင်အောင် လုပ်တဲ့သူကို တစ်ဘဝလုံးစာ ရွေးချယ်မယ် ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်များလှပါတယ် …။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လှည့်စားတာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ကောင်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိမ်ဖန်များစွာ သစ္စာမရှိဘဲ လှည့်စားနေတယ် ဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ယုံကြည်မှုက ပျက်စီးသွားပါပြီ။ ယုံကြည်မှုကို ပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့က မလွယ်ကူပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင့်အပေါ် သစ္စာမရှိ လှည့်စားတတ်သူဆိုရင် နှစ်ခါပြန် လှည့်ကြည့် မနေသင့်တော့ပါဘူး …။
(၅) သင်နဲ့ချစ်နေရတာကို စိတ်ပျက်နေသူ
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို စိတ်ပျက်နေပြီး လမ်းခွဲစကားကို အမြဲလိုလိုပြောနေတယ် ဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းလှည့်ထွက်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပါ။ တကယ်လက်ထပ်ချင်သူဆိုတာ သင်နဲ့အတူ ဘဝကို အတူတူဖြတ်သန်းဖို့ စိတ်ကူးတွေအပြည့်ပါပဲ …။
သင်လက်ထပ်မယ့်သူက ဒီ ၅ ချက်ကို ပြင်ဆင်မယ် ဆိုရင်တော့ အခွင့်အရေး ပေးသင့်ပါတယ်နော် …။ ။
ပြိုမတေို့ လုံးဝ လုံးဝ လကျမထပျသငျ့တဲ့ယောကျြားတှေ ရဲ့ အပွုအမူ (၅) ခကျြ
လူတိုငျးက ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ပဲ လကျထပျလိုကွပါတယျ။ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ လကျထပျမယျ့ စိတျကူးအိပျမကျတှကေလညျး အမြားကွီးရှိမှာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ လကျထပျဖို့ ဆိုတာကတော့ သသေခြောခြာ အခြိနျယူပွီး စဉျးစားသငျ့တဲ့အရာပါ။ သငျနဲ့လကျထပျမယျ့ အမြိုးသားက ဒီလိုအခကျြတှေ ပွုမူနတေယျဆိုရငျတော့ လကျမထပျသငျ့ပါဘူးနျော ….
သငျ့ခဈြသူက ပွောပွီးသားစကားတှကေို မမေ့ပြေ့ောကျပြောကျနဲ့ လှယျလှယျ ကတိဖကျြတတျသူ ဆိုရငျ တကယျ့ပွဿနာ ပါပဲနျော။ ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ကတိသေးသေးလေး ကိုတောငျ မတညျသူက ကတိအကွီးကွီးတှကေို တညျဖို့ဆိုတာ ဝေးလှနျးပါတယျ …။
(၂) သငျ့အပျေါ လုံးဝ လေးစားမှုမရှိဘဲ သိက်ခာခသြူ
လကျထပျပွီးတဲ့အခါ တဈယောကျကိုတဈယောကျ လေးစားမှု မရှိတဲ့အခါ လုံးဝ အဆငျမပွပေါဘူးနျော။ သငျ့ကို အလေးမထားသူက နဈနာအောငျလုပျဖို့လညျး ဝနျလေးမှာမဟုတျပါဘူး။ သငျ့အပျေါ လေးစားမှုမရှိဘဲ သိက်ခါခတြတျသူကို လကျထပျမိရငျတော့ ဘဝတဈလြှောကျလုံး ပြျောရှငျမှုတှနေဲ့ အလှမျးကှာနမှောပါ …။
(၃) သငျ့ရဲ့စိတျကို နာကငျြစသေူ
သူ့ရဲ့အပွုအမူ၊ အပွောအဆိုတှကွေောငျ့ သငျက အမွဲလိုလိုနာကငျြနရေတာက လုံးဝကို မှားနပေါပွီ။ သငျ့ကိုတကယျခဈြတဲ့သူဆိုရငျ အဆငျမပွတေဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အဆငျပွသှေားအောငျ ပွုပွငျနဦေးမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကို အမွဲနာကငျြအောငျ လုပျတဲ့သူကို တဈဘဝလုံးစာ ရှေးခယျြမယျ ဆိုရငျတော့ အန်တရာယျမြားလှပါတယျ …။
တဈခါတဈရံမှာ လှညျ့စားတာကိုတော့ ခှငျ့လှတျပေးနိုငျကောငျး ခှငျ့လှတျပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွိမျဖနျမြားစှာ သစ်စာမရှိဘဲ လှညျ့စားနတေယျ ဆိုရငျတော့ သငျတို့နှဈယောကျကွားက ယုံကွညျမှုက ပကျြစီးသှားပါပွီ။ ယုံကွညျမှုကို ပွနျရအောငျလုပျဖို့က မလှယျကူပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့အပျေါ သစ်စာမရှိ လှညျ့စားတတျသူဆိုရငျ နှဈခါပွနျ လှညျ့ကွညျ့ မနသေငျ့တော့ပါဘူး …။
(၅) သငျနဲ့ခဈြနရေတာကို စိတျပကျြနသေူ
သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို စိတျပကျြနပွေီး လမျးခှဲစကားကို အမွဲလိုလိုပွောနတေယျ ဆိုရငျတော့ ခကျြခငျြးလှညျ့ထှကျခဲ့တာ အကောငျးဆုံးပါ။ တကယျလကျထပျခငျြသူဆိုတာ သငျနဲ့အတူ ဘဝကို အတူတူဖွတျသနျးဖို့ စိတျကူးတှအေပွညျ့ပါပဲ …။
သငျလကျထပျမယျ့သူက ဒီ ၅ ခကျြကို ပွငျဆငျမယျ ဆိုရငျတော့ အခှငျ့အရေး ပေးသငျ့ပါတယျနျော …။ ။
တစ် သက်လုံးအသုံး ဝင် တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးနည်းပေါင်း စုံ ရှယ်သွားနော် တချိန်မဟုတ်တချိန် အသုံးဝင်မှာ သေချာပါတယ်